(Daawo) Dowladda Federaalka oo xiriirka u jartay Kenya, ceyrisayna Safiirka Kenya - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka (Daawo) Dowladda Federaalka oo xiriirka u jartay Kenya, ceyrisayna Safiirka Kenya
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku amartay inuu dalkiisa dib ugu laabto safiirka dowladda Kenya u fadhiya Muqdisho. Sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa u yeeratay safiirkeeda ka jooga Nairobi Maxamuud Axmed Nuur Tarsan.
Dowladda Soomaaliya ayaa Kenya ku eedeysay inay faragelin qaawan ku heyso arrimaha gudaha dalkeenna waxayna ku eedeeysay in aay cadaadis ba’an ku hayaan MW Jubbaland Axmed Madoobe.
“Dowladda federaalka Soomaaliya waxaa u muuqata in dowladda Kenya ay si bareer ah u fara gelineyso arrimaha gudaha Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, iyadoo cadaadis ku heysa madaxweynaha Jubbaland, Axmed Madoobe si uu u fuliyo qorshaheeda ku aaddan faragelinta iyo carqaladeynta heshiiskii siyaasadeed ee doorashada Soomaaliya laga gaaray” ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka dowladda Soomaaliya.
Halka Hoose ka daawa warsaxaafadeedka Dowladda Federaalka
James Swan oo ku baaqay in shir degdeg ah oo dhexmara DFS iyo Dowlad Goboleedka
Mareykanka oo soo afjaray qorshaha kala bixitaanka ciidankeeda dalka Soomaaliya